आइजीपीको छोरामाथि किन उजुरी दर्ता भएन ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:32:08
जापानी समय : 06:47:08
18 August, 2015 13:03 | पत्रपत्रिका | comments | 35250 Views
मणिपाल हस्पिटलका प्रशिक्षार्थी डाक्टर अनिमेष ठाकुरको मृत्युपछि परिवारले दिएको उजुरी किन दर्ता नगरेको भनेर अदालतले प्रहरीसँग कारण मागेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोरा डा. आयुषको नाममा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि ठाकुर परिवार अदालत गएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालका छोरा आयुष र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा। गरिबदास ठाकुरका छोरा अनिमेष सहपाठी र घनिष्ट मित्र थिए । उनीहरूकै मिल्ने साथी डा। प्रतिसा बस्ने घरको छतबाट खसेर १९ असारमा अनिमेषको मृत्युपछि परिवारले अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ ।
तर, महानिरीक्षकका छोरा मुछिएको घटनामा प्रहरीले उजुरी नै लिन नमानेको डा.ठाकुरको गुनासो छ । छोराको हत्या भएको हुनसक्ने भन्दै डा. ठाकुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा किटानी उजुरी दर्ता गराउन खोजेका थिए ।तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नुको साटो उल्टै धम्की दिएको उनको आरोप छ । उजुरी दर्ता किन नभएको भन्ने जवाफ दिन अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कुनै समयका असल साथी अनिमेष र प्रतिसाको सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रिएको ठाकुर परिवारको भनाइ छ । त्यो राति फोनमा झगडा भएपछि अनिमेष प्रतिसाको कोठामा जाँदा त्यहाँ आयुष पनि थिए भन्ने प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सोही राति त्यही घरको छतबाट खसेर अनिमेषको मृत्यु भएको थियो । छोराको मृत्यु दुर्घटना मात्र होइन, हत्या नै हुन सक्छ भन्दै ठाकुर परिवारले आयुष र प्रतिसामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्दै आएको छ । घटनाको जानकारी आएपछि रातारात पोखरा पुगेका डा। ठाकुरले २० असारमा नै प्रहरीमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, उजुरी दर्ता नभएपछि उनी छोराको शव लिएर किरियाकर्मका लागि गाउँ महोत्तरी गएका थिए । किरियाकर्म सकेपछि ५ साउनमा उनले वकिलमार्फत किटानी जाहेरी दिन खोजेका थिए, तर प्रहरी र प्रशासनका दुवै कार्यालयले लिन मानेनन् ।